Eyona ntlanzi imibala ye-aquarium | Ngeentlanzi
Eyona ntlanzi inemibala ye-aquarium
Ukuba uthathe isigqibo sokuba ne-aquarium ekhaya kwaye wonwabe amava anomvuzo kunye namava amnandiNgelixa kukuzisela imvisiswano, kukho inani leentlanzi ezinokukuzisela ukuzola kuba zezona zinemibala kwaye zilungele ukunika ubomi kwi-aquarium. Ke ngoko, qaphela eyona ntlanzi ixhaphakileyo kwi-aquarium.
Ingelosi yentlanzi: Luhlobo lwentlanzi olunganyangekiyo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zayo ezinemibala eyahlukeneyo kunye nobukhulu. I-Angelfish zihlala zincinci, ezenza ukuba zidityaniswe ngokugqibeleleyo kwi-aquariums ezinesilinganiso esiphakathi, kukho ezinkulu ezinkulu ezifuna indawo enkulu kunye nononophelo olukhulu.
Intlanzi yamehlo ebubble: Zaziwa ngokulula kuba zineengxowa ezinamanzi eziphantsi kwamehlo azo. Inkangeleko yazo ibenza bahluke, umzimba wabo uphakamile kwaye abanasiphelo sasemqolo.
Xoxa iintlanzi: Ngomzimba ophakamileyo kunye nokumila okujikelezileyo, isiphetho somqolo esigubungele wonke umzimba kuyamangalisa ukubona ukuba sihamba njani ngenxa yendlela eyahluke ngayo. Yintlanzi ukuba ukuba inyanyekelwa kakuhle, siya kufumana uhlobo oluya kwenza i-aquarium yethu ibe bubuhle beetropiki.
Intlanzi yaseBettaNgokuqhelekileyo yaziwa ngokuba 'ngumlobi kaSiam' ngenxa yezenzo ezingekho mthethweni kwamanye amazwe aseAsia, apho babebekwa khona ukuba balwe. Ubuhle bayo obukhulu busemaphikweniNangona inempawu ezinobundlongondlongo kangangokuba kunqabile ukuba iqhutywe nezinye iintlanzi, eyona ndawo ihlala kuyo kukuba nazo kwiilwandle ezinkulu ukuze zibe nendawo yazo.
Intlanzi yeKoyi: Koi, okuthetha uthando ngesiJapan, ziyaqwalaselwa intlanzi entle kwaye sele zixatyisiwe ukusukela kwinkulungwane ye-19.Awona maqondo obushushu afanelekileyo okusinda kwabo aphakathi kwama-22 ukuya kuma-28 ama-degree kwaye ngokuba yi-omnivores abanazidlo zingqalileyo. Zizolile kwaye zinoxolo ngokupheleleyo iintlanzi.
Intlanzi yeteleskopu: Enye yeentlanzi ozithandayo ukuba nazo kwi-aquarium. Umzimba wayo osisangqa omfutshane onemisila emibini kunye namaphiko endunduma, kunye namehlo ayo amakhulu, uyenza yahluke kwaye ibukisa. Yi iintlanzi ezicothayo, Kuyacetyiswa ke ukuba uhlale neentlanzi ezizolileyo nezicothayo ngokulinganayo.
Intlanzi yebhola yemolly: Yintlanzi ezolileyo enokuhlala nezinye iintlobo ngaphandle kokuphazamiseka. Ukukhathalela kwakhe kuyinto eqhelekileyo kwaye ke yiyo iintlanzi kwimfuno zamanzi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Eyona ntlanzi inemibala ye-aquarium
Izityalo zokudada emanzini